Maxaad ka ogtahay in DF Somaliya ay horumar ka sameysay canshuur ka aruurinta Muqdisho? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaad ka ogtahay in DF Somaliya ay horumar ka sameysay canshuur ka...
Maxaad ka ogtahay in DF Somaliya ay horumar ka sameysay canshuur ka aruurinta Muqdisho?
Muqdisho (Halqaran.com) – Sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Wasaaraddu wax ay si xowli ah u aruurineysaa canshuuraha barriga iyada oo ay jiraan caqabada badan oo ku hor gudban aruurinta canshuurahaasi.
‘‘Markii aan xafiiska qabanayay bishii Agoosto 2014-kii xafiiskan si fiican uma shaqeyneyn, kaliya $30,000 ayaan bishiiba ka aruurin jirnay magaalada Muqdisho” ayuu yiri Muxudiin Xassan Jurus oo wareysi siinayay Wargeyska Anadoolu ee ka soo baxa dalka Turkiga.
Waxa uu sheegay in Wasaaradda maaliyaddu ay la kulantay ganacsatada kana dhaadhicisay faa’iidooyinka ay leedahay canshuur bixinta.
“Haatan wax aynu Muqdisho kaliya ka aruurinaa 7 illaa 9 milyan oo doollar” ayuu yiri Muxudiin Jurus
Wax uu sheegay in waaxda canshuuraha barriga ay la shaqeeyaan booliis gaar ah oo ka caawiya soo aruurinta canshuuraha laga qaado ganacsiyada ku yaalla magaalada Muqdisho.
Boqolaal shirkad oo gudaha iyo dibaddaba ku yaalla ayaa ganacsiyo hor leh ka furtay magaalada Muqdisho, shaqaalaha ka howlgala ganacsiyadaasna waxaa mushaarkooda bil walba laga jaraa canshuur.
Dakhliga laga aruuriyo magaalada Muqdisho waxaa toos loogu hagaajiyaa Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya taas oo iyaduna ka bixisa mushaaraadka shaqaalaha rayidka kana dhista jidad, iskuullo iyo xarumo caafimaad.
Agaasinka Waaxda Canshuuraha barriga ah oo ka hadlayay caqabadaha horyaalla soo uruurinta canshuuraha ayaa sheegay in mararka qaar ay al-Shabaab beegsadaan shaqaalaha Wasaaradda ee qaabilsan canshuur aruurinta.
Soomaaliya muddo labaatan sano ah dowlad la’aan aheyd ayaa hadda dowladnimadeedii dib u soo hagaageysaa dakhliga dowladda ee dhanka canshuuraha ayaa sanadba sanadka ka danbeeya sii kordhaya dowladuna wax ay awood u yeelatay bixinta mushaarka shaqaalaha iyo gaarsiinta bulshada ee adeegyada aasaasiga ah.